गलत सूचनाबाट कसरी बच्ने ? अफवाह फैलाउनेलाई के कारबाही हुन्छ ? - Himali Patrika
गलत सूचनाबाट कसरी बच्ने ? अफवाह फैलाउनेलाई के कारबाही हुन्छ ?
हिमाली पत्रिका ८ चैत्र २०७६, 3:27 pm
काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण विश्वभर फैलिसकेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय सुनाए। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान शनिबारदेखि बन्द भएका छन् भने लामो दूरीका सवारीसाधन आइतबारदेखि बन्द हुँदैछन्।
अपराध संहिताको दफा ७० को उपदफा (१) र (२) मा अफवाह फैलाउनेलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ। संहिताको दफा ७० को उपदफा (१) मा कसैले सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायिबीचको समुधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियतले कसैलाई उक्साउने गरी नभए र नगरेको अफवाह फैलाउन, प्रचार प्रसार गर्न वा नारा जुलुस गर्न हुँदैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी दफा ७० को (२) मा कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। यो सामग्री दिनेश लुइटेलले अन्नपुर्णपोस्टका लागि लेख्नु भएको हो।